နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဂျူးဘုရားကျောင်းကဘာလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဂျူးဘုရားကျောင်းကဘာလဲ?
ဒါကြောင့်ဘဲနိုင်ငံပိုင်၌ရှိသကဲ့သို့, ဒါပေမယ့်လူများစုအဖြစ်, အစ္စရေးကိုခေါ်မယ့်တူသောဒါဟာပုံရသည်။
တရားစရပ် (ဂရိ) ဂျူးလူမျိုးများအားအများပြည်သူကိုးကွယ်မှုအတွက်နေရာဖြစ်သည်။ ဟီးဘရူး - Beit လွှတ်တော်အမတ် - ပရိသတ်အိမ် - ဗမာ - ဗမာအဘိဓါန် - Glosbe \_ t Shul - ကျောင်း။
တရားဇရပ်အဆောက်အအုံသည်စည်းကမ်းချက်အရစတုဂံပုံသဏ္hasာန်ရှိသည်။ အဓိကမျက်နှာစာသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့အမြဲတမ်း ဦး တည်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဥရောပနိုင်ငံများအတွက်အရှေ့ဘက်သို့ ဦး တည်ရာကိုဆိုလိုသည်။ ဆုတောင်းခြင်းမတိုင်မီလက်များကိုဆေးကြောရန်စုပ်ယူသည့်တံခါးနားတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်သီးခြားခန်းများ၌ဆုတောင်းကြသည်။ စည်းကမ်းများအရတရားဇရပ်သည်မြို့၏အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်မတူသည်မှာတရားဟောရာနေရာသည်ဗိမာန်တော်မဟုတ် - ဗိမာန်တော်သည်ဘုရားကျောင်းတောင်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဖျက်ဆီးခံရသည်။ တရားဟောရာနေရာသည်ရိုးရာဂျူးဥပဒေ - တိုရာအားဆုတောင်းခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းပြုသည့်အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်သည်။
ဤတွင်စိန့်ပီတာစဘတ်, Astana, Florence, ကိယက်ဗ်အတွက်တရားစရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကရာကျမ်းကိုလေ့လာသွားဖို့ရှိပါတယ်ရှိရာယုဒလူတို့ကိုအသင်းတော်သည်လည်းပဌနာကိုခေါ် တရားစရပ်။ ယေရုရှလင်မြို့, ယုဒလူတို့အဘို့အဓိကမြို့ဆီသို့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသို့မှသာတရားစရပ်အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ခြင်းစဉ်အတွင်း။
ဂျူးဘာသာကိုခေါ်ယုဒလူများစုကိုးသောဘာသာတရား။ ယုဒလူတို့အဖြစ်ခရစ်ယာန်နှင့်မွတ်စလင်တဦးတည်းဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပေမယ့်ယရှေုခရအသိအမှတ်မပြုကြဘူး။ ဂျူးဘုရားကျောင်းတရားစရပ်ဟုခေါ်သည်။
မကြာခဏဆိုသလိုတရားစရပ်အဖြစ်ရည်ညွှန်း။ ဒါပေမယ့်ဒီစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ တရားစရပ်တခုဗိမာနျတျောပေမယ့်စည်းဝေးပွဲကိုရာအိမ်နှင့်ဂရိစကားလုံးမဟုတ်ဘူး။ ယုဒလူတို့ကယနေ့အဘယ်သူမျှမဘုရားကျောင်းဖြစ်ကြသည်။
အောက်မှာပါလျှင် ဘုရားရှိခိုးကြောငျး ဆုတောင်းရန်နေရာနှင့်ရိုးရာဘာသာကိုလေ့လာခြင်းအတွက်ဘာသာရေးစုဝေးရာနေရာဟုဆိုလိုသည် တရားစရပ်.
သငျသညျဆိုလိုပါလျှင် Quote ပြု. , tserkovquot; ခရစ်ယာန်သဘောအရယခုထဲမှာ ဣသရလေ နေရောင်ကိုခေါ်ထားတဲ့ပိုကြီးတဲ့ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း, ပေါ်လာသော မေရှိယနှုတ်ကပတ်တရားတော်ထဲကနေ ရှေိယကို - ထိုစကားလုံး၏ဟေဗြဲဘာသာပြန်ကျမ်း ခရစ်တော် (ဘိသိကျခံ) ။
အဖြစ်ဝေးငါသိသည်အတိုင်း, ယုဒလူတို့ (ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုခေါ်) ဆုတောငျးပေးရာအရပ်ဟုခေါ် တရားစရပ်တို့၌။
(ယုဒလူတို့ကဲ့သို့အ) သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိများစွာသောတရားစရပ်တို့၌။ သူတို့ဟာမော်စကိုနှင့်စိန့်ပီတာစဘတ်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။
ဂျူးဘာသာကမ္ဘာပေါ်မှာရှေးအကျဆုံးဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူးဘာသာ, အရာကျမ်း၏နောက်လိုက်များဟုခေါ်တွင်သောအခန်း၌ဆုတောင်းပဌနာ, အဓိကအဘို့သန့်ရှင်းစာအုပ်စဉ်းစားပါ တရားစရပ်။ ဒါဟာလူတွေတစ်ဦးတည်းသာနိုင်ငံသားအဖြစ် Judaists ဖြစ်ကြောင်းမလိုအပ်ပါဘူး။ ပြီးတာနဲ့ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့အခါ Quote ထ; သံ zanavesquot; နှင့်လွတ်လပ်စွာဆိုဗီယက်စွန့်ခွာနိုင်, ဆိုက်ဘေးရီးယားဂျူးဘာသာဝန်ခံလူများ၏နိုင်ငံသားအားဖြင့်တစ်ရွာလုံးရုရှားကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဣသရေလအမျိုးကိုထွက်ခွာဖို့ရှာကြောင်းသတင်းစာများအတွက်သတင်းစကားကိုလွန်။
ဂျူးတရားစရပ်ဘုရားကျောင်းအရှိဆုံးမှန်ကန်သောအမည်ဖြင့်အလွန်မကြာခဏလည်း Quote ကိုခေါ်ကြလိမ့်မည်အောက်လွှတ်တော် sobraniyaquot; သောတရားစရပ်နိုင်အောင်ဟီဘရူးထံမှဘာသာပြန်ထားသောကြောင့်။ သောပုံမှန်ထက်ဘုရားကျောင်းနှင့်အတူကရှုပ်ထွေးမဟုတ်ဘူးနှင့်, သင်တိုင်းတရားစရပ်အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထိုကဲ့သို့သောဇာတ်ကောင်များကပဲ့ထိန်းနိုင်ပါတယ်
ဂျူး Orthodox ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဒီမှာပထမနေရာမှာနေတဲ့မတူလက်ဝါးကပ်တိုင်အရပျ၌ထိုကဲ့သို့သောခရေပွင့ဖြစ်ပါသည်:
ဂျူးဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုခေါ်တယ် - တရားစရပ်။ ဟီဘရူးဘာသာမှပြန်ဆိုထားသောစကားသည်ဤစကားမှာ;
ဂျူးဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွက်နောက်ထပ်အမည်တစ်ခုရှိသည် - တောင်ပေါ်ဂျူးများက၎င်းကိုခေါ်သည် Nimaz.
ဤမေးခွန်းကိုသင်ပြုသောပဌနာ၏အရပျကိုရည်ညွှန်းပြီး, ဒါမှမဟုတ်ခရစ်ယာန်အသိထဲမှာဘုရားကျောင်းအကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်ဆိုတာကိုပေါ် မူတည်. နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဖြေကြားနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမူကွဲ (ဝတ်ပြုရာနေရာအရပ်) အကြောင်းပြောဆိုလျှင်, ဟုခေါ်သည် တရားစရပ်!
ဒါပေမယ့်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအနေနဲ့ဒုတိယရွေးစရာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတွေရှိတယ် - မေရှိယအသငျးတျောမြား!
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,375 စက္ကန့်ကျော် Generate ။